Truth be known: နိုင်ငံတော် အလံသစ် ဟောကိန်း
Posted by generation96 at 9:27 AM
မြန်မာ Blog တွေပေါ်က Post ကောင်းကောင်းလေးတွေကို စာအုပ်ထုတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ အကျိုးအမြတ် တစုံတရာရလာခဲ့ရင် လိုအပ်နေတဲ့နေရာ တွေမှာလှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ သိပြီးသားလည်း ဖြစ်မှာပါ။ Blog တွေကို ခွဲတမ်းနဲ့ဖတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပြီး အခုဒီ Blog ကိုတော့ ကျွန်တော်ဖတ်ရမှာပါ။ ဒီ Blog ထဲက သင့်တော်တဲ့ Post များတွေ့ခဲ့ရင် ထပ်ဆင့်ရွေးချယ်တဲ့ အဖွဲ့ကို ကျွန်တော်က တင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီရွေးချယ်ခံရတဲ့ Post ကိုသုံးခွင့်ပြုဖို့ သဘောတူ၊ မတူသိပါရစေ။ နောက်ပြီး ပါစေချင်တဲ့ Post လေးများရှိရင်လည်း အကြောင်းကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ရဲ့သဘောထားကို ဒီ Comment ရဲ့အောက်မှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ ပူးပေါင်းကူညီမှုကို ကျေးဇူးတင်လျက် ...
အသေးစိတ်သိလိုပါက ... http://soezeya.blogspot.com နှင့် mmblogbook@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာ။ တခုဘဲရှိတယ်။ ကျနော့် post တွေက တခုမှ နိုင်ငံရေးနဲ့လွတ်တာ မပါဘူး။ တော်တော်လေး edit လုပ်မှရလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုကို လေးစားပါကြောင်းလည်း ဒီနေရာကနေပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
11:40 PM, April 21, 2007
ကျနော်သည်လည်း ဗေဒင်ကို လုံးဝ(လုံးဝ) မယုံပါ။ ဗေဒင်ဆရာခိုင်းသမျှ လိုက်လုပ်နေသော ဟိုလူကြီးများကိုလဲ.. လုံးဝ.. လုံးဝ။
ကို generation 96 ပို့စ်ထဲက ဒေါင်းစကြာလုလင် ဟောကိန်းရဲ့ အလံကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ပုံလေးနဲ့ တကွ တင်ရင် ပိုမိုက်မယ်ဗျာ။ :)
ကိုမျိုးဆက်ရေ… အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလား။
ကိုသံလွင်ရေ..ကျနော်လည်း အလံကို တင်ချင်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်က ပုံတွေက အချိုးအစား မမှန်လို့၊ ကျနော်ကိုတိုင်လည်း မဆွဲတတ်တာနဲ့ မတင်လိုက်တာ။
ကိုပု…ဟုတ်ပ၊ ရှုပ်နေတာ ခုမှ နည်းနည်းလေး အချိန်ရလို့။
ခုမှပြန်ပြောနိုင်တာ အားလုံးကို ဆောရီးပါ။
I love Dawn Sakkyar.
Also, the article, "Burma at Starting Bad Fate" is historically valuable.
I have recommended your blog at my page without your acknowledgement, and I request for your approval.
Think we have spent the same university age within 1987-1996..
ကိုမောင်ရင်….ဖြစ်မှ ဖြစ်တတ်ပလေ…ကျနော်က ကိုမောင်ရင့်ဆီ ရောက်နေတဲ့ အချိန် ကိုမောင်ရင်က ကျနော့်ဆီရောက်နေတယ်။ ကျနော် တက္ကသိုလ်စတက်တာ ၉၅ အကုန်မှဗျ။ ကိုမောင်ရင် ကျနော့်ထက် အများကြီး ကြီးပုံရတယ်။